#Axmed Karaash oo loo doortay Madaxweyne ku xigeenka Puntland | Get Latest News From Horn of Africa
#Axmed Karaash oo loo doortay Madaxweyne ku xigeenka Puntland
By Wanaag On Jan 8, 2019 Last updated Mar 31, 2019
Axmed Cilmi Cismaan [Karaash] ayaa ku guuleystay doorashadii Madaxweyne kuxigeenka Puntland, siyaasigan oo kasoo jeeda gobalka Sool ayaa horey xilala kala duwan uga soo qabtay xukuumadihii hore ee Puntland.
Xilka Madaxweyne kuxigeenka oo ay ku tartamayeen 11 murashax ayaa wareegii ugu danbeeyey isugu soo hareen labada murashax oo kala helay:
Axmed Cilmi Cismaan [Karaash] – 47
2- Cabdi Cismaan Qawdhan – 19
Codbixintan ayaa soo afjareysa doorashadii Puntland ee lagu doortay Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka cusub ee Puntland oo xilka loo dhaariyey shanta sano ee soo socota.
#Farmaajo oo ka qeyb galaya Shir Madaxeed gaar ah oo looga hadlayo Arrimaha Sudan
#Yariisow:Sadex kun oo Ciidan ah oo lagu wareejinayo amniga Muqdisho
Madaxweynaha cusub Siciid Cabdullahi Deni oo isagu saaka xilka loo doortay ayaa u hambalyeeyey Madaxweyne kuxigeenka cusub Axmed Karaash oo ah siyaasi saameyn weyn ku leh gobalka Sool, isla markaana taageero xoogan ka heystay issimada gobalkaasi kasoo jeeda.
Axmed Karaash oo isla markiiba loo dhaariyey xilka loo doortay ayaa hadal kooban oo uu soo jeediyey ku sheegay inuu balan qaadayo inuu si wanaagsan ulla shaqeeyo Baarlamaanka doortay.
Cabdi Cismaan Qawdhan oo ah murashaxii loolanka adag la galay tartanka Madaxweyne kuxigeenka oo goobta ka hadlay codbixinta kadib ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay qaabka ay doorashada u dhacday.
Madaxweyne kuxigeenka xilka ka degaya Eng.Cabdixakim Camey oo golaha ka hadlay ayaa dhankiisana u hambalyeeyey hogaamiyaha cusub ee la doortay, Camey oo isaguna mar labaad u tartamay xilka ayaa doorashada ku hungoobay si lamid ah saxiibkiis Madaxweynaha xilka ka degaya Cabdiweli Gaas oo isaguna tartanka ku haray wareegii kowaad.
#Kheyre: Beesha Caalamka Ma aqbaleyso in mushaharka…
2 hours ago 18,982
#Kheyre Waa Raysal Wasare laba Sano…
2 hours ago 25,889
#Wasir Geelle: Mucaaradka iyo…
2 hours ago 36,996
#Jorge Valdano:Bale Oo aan aheyn…
2 hours ago 293,786
Prev Next 1 of 3,460